Oophuma-silwe Bonqulo Zange Bawayekise AmaNgqina KaYehova
Abazalwana noodade abazange bayeke ukukhonza uYehova naxa kwamoshwa izinto zabo
EGEORGIA | 1998-2006
Abazalwana noodade babengoyiki ngokoyikiswa, ibe baqhubeka besiya kwiintlanganiso. Abadala baqhubeka bezama ngandlela zonke ukuze bakhusele abavakalisi. UMzalwana uAndré Carbonneau, oligqwetha laseKhanada nowayemela abazalwana kuloo minyaka, uthi: “Kwakubekwa umzalwana onefowuni kufutshane naloo ndawo ineentlanganiso ukuze agade. Xa ebona kusiza ihlokondiba, ngoko nangoko wayelumkisa abadala.”
Ikhaya labakwaShamoya (ekhohlo) nedepo yeencwadi zatshiswa (ekunene)
Xa beye bahlaselwa, babetyelelwa ngabazalwana ababini abasuka kwiofisi yesebe ukuze babakhuthaze. UAndré uthi “Sihlandlo ngasinye betyelele, babefika uncumo lubhalwe ebusweni babazalwana yaye bonwabile. Yayimangalisa nyhani loo nto.”
Abazalwana batshutshiswa ngaphakathi nangaphandle kweenkundla zamatyala
Nkqu nabo bangahlaselwanga ngokungqalileyo, kuquka izifundo zeBhayibhile, babengoyiki. UAndré ukhumbula incoko yakhe nelinye ibhinqa elaliza kuba ngumvakalisi ongabhaptizwanga. Lathi, “Xa ndandibukele olu hlaselo kumabonakude, ndatsho ndabona umahluko phakathi kwamaKristu okwenene nawobuxoki, ibe mna ndifuna ukuba ngumKristu wokwenene.”
Ukuthethelela Amanye AmaKristu Ngesibindi
Kuloo minyaka inzima, abavakalisi babonisa ukuba banokholo nesibindi ngokusoloko bexakeke ngumsebenzi wokushumayela. Nabo babemela amaKristu enkundleni babonisa ukholo olufanayo.
Amajelo eendaba ayedla ngokuxoka ngamaNgqina, esithi ohlukanisa iintsapho, akafuni kunyangwa yaye achasa uRhulumente. Amagqwetha awayewathethelela ayezibeka esichengeni sokungathandwa nesokuphelelwa yimisebenzi.
Abazalwana abangoyiki ngokoyikiswa abasuka kwiSebe Lezomthetho eMerika bathethelela abazalwana kwiinkundla zamatyala
UJohn Burns, oligqwetha kwisebe laseKhanada nowanceda abazalwana baseGeorgia kuloo minyaka uthi: “Abazalwana noodade ababengamagqwetha babanceda abazalwana. Nangona babenokulahlekelwa yimisebenzi, abazange boyike ukuya enkundleni baze bazichaze ukuba bangamaNgqina KaYehova.” Loo maNgqina anesibindi ancedisa ‘ekuthethelelweni nasekumiselweni ngokusemthethweni kweendaba ezilungileyo.’—Fil. 1:7.
Abantu BaseGeorgia Bathi Ugonyamelo Maluphele
Noko ke, amaNgqina aqhubeka ebethwa. Ngenxa yoko, ukususela ngoJanuwari 8, 2001, amaNgqina asasaza uxwebhu olwalusithi afanele akhuselwe ekubethweni ngamahlokondiba, lucela nokuba batshutshiswe ziinkundla abo babehlasela abantu abanoxolo.
UMzalwana uBurns uchaza injongo yolu xwebhu esithi: “Sasifuna ukubonisa ukuba abantu abaninzi baseGeorgia babengayifuni le nto yokubethwa kwamaNgqina KaYehova, ibe yayiligcuntswana nje loophuma-silwe elalisenza le nto.”
Kwathi kungekapheli neeveki ezimbini lwabe olu xwebhu selusayinwe ngabantu abayi-133 375 abavela kulo lonke elaseGeorgia—phofu abaninzi ingamalungu ecawa yobuOthodoki. AmaNgqina aqhubeka ebethwa nangona olu xwebhu lwanikwa uMongameli uShevardnadze. Oophuma-silwe beecawa baqhubeka behlasela amaNgqina.
Amawakawaka abantu baseGeorgia basayina uxwebhu olwalugxeka ukubethwa kwamaNgqina
Kodwa ke yena uYehova waqhubeka ebasikelela abantu bakhe. Ngoxa aba phuma-silwe babehlupha abantu bakaThixo, uYehova yena wayetsala abantu ebakhupha kunqulo lobuxoki.
Ukuphuma Kunqulo Lobuxoki
UBabilina Kharatishvili wayechithe ubomi bakhe elilungu elivuthayo leCawa yobuOthodoki baseGeorgia. Xa wayeneminyaka ephaya koo-30, watyhutyha iidolophu efundisa abantu ngobomi beengcwele.
Kodwa ke uBabilina wayefuna ukumazi kakuhle uThixo. Ngoko waya kwiiklasi zesinye isikolo samaOthodoki aseGeorgia. Ngenye imini omnye umfundisi wabonisa abo babemphulaphule incwadi ethi Ulwazi Olukhokelela Kubomi Obungunaphakade waza wabakhuthaza ukuba bafumane iikopi kumaNgqina KaYehova. Wathi kubo, “Ininzi gqitha into eniya kuyifunda ngeBhayibhile kule ncwadi.”
Wothuka gqitha uBabilina. Wayesoloko ewabaleka amaNgqina, kodwa nanko ngoku umfundisi esithi makufundwe iincwadi zawo! Wazixelela oku, ‘Ukuba ngamaNgqina KaYehova aza kundifundisa ngoThixo, ndifuna ntoni ke apha?’ Waqhagamshelana namaNgqina akwisixeko sasePoti waza waqalisa ukufunda iBhayibhile.
Njengoko uBabilina wayeqhubeka efunda iBhayibhile, wenza utshintsho olubalulekileyo ebomini bakhe. Ngenye imini, wathi: “Xa ndazibonela ngawam ukuba iBhayibhile ithi akulunganga ukunqula imifanekiso, ndohlukana nazo zonke iintlobo zonqulo-zithixo. Ndandiqinisekile ukuba yeyona nto ndifanele ndiyenze.” Ngelo xesha, waba liNgqina LikaYehova eneminyaka engaphaya kweyi-70.
UBabilina wafundisa umzukulwana wakhe uIzabela iBhayibhile
Okubuhlungu kukuba ngo-2001, uBabilina wagula waza wasweleka ngaphambi kokuba abhaptizwe. Kodwa ke umzukulwana wakhe uIzabela yena wabhaptizwa ibe sithethanje ukhonza uYehova.
Wayefuna Ukuba Ngunongendi
UEliso Dzidzishvili wayeneminyaka eyi-28 xa wagqiba ekubeni abe ngunongendi. Ekubeni lalingekho ikhaya loonongendi kufutshane nedolophu yakhe iTkibuli, ngo-2001 wafudukela eTbilisi. Ngoxa wayesakhangela isithuba kwikhaya loonongendi, wafumana isingxungxu sokutitsha. Omnye wabafundi bakhe yayiyintombi yodade ekuthiwa nguNunu.
UEliso uthi: “Sasidla ngokuncokola ngeBhayibhile. Ndandisithi ubuOthodoki lolona nqulo, ngoxa yena uNunu wandibonisa iivesi eziliqela zeBhayibhile. Ngenye imini wacela ukundifundisa esebenzisa incwadana ethi Yintoni UThixo Ayifunayo Kuthi? Njengoko sasifunda iziqendu kwaye sijonga neevesi zeBhayibhile, ndabona ukuba ukunqula imifanekiso kukophula umthetho kaThixo.”
Kamva, uEliso waya ecaweni waza wabuza umfundisi imibuzo ethile. Weva apha kwiimpendulo zakhe ukuba izinto ezifundiswa ecaweni azikho seBhayibhileni. (Marko 7:7, 8) Wabona ngokucacileyo ukuba ufumene inyaniso, ibe waqalisa ukufunda iBhayibhile namaNgqina KaYehova waza wabhaptizwa kungekudala.
UEliso Dzidzishvili (ekhohlo), owayefuna ukuba ngunongendi, noNunu Kopaliani (ekunene)
Ukwakha IiHolo ZoBukumkani Nangona Kuchaswa
Ngo-2001, ayemaninzi gqitha amabandla awayedinga iindawo zokunqulela. Olunye uqikelelo lwalusithi kudingeka iiHolo ZoBukumkani ezimalunga neziyi-70. Ngoko kwaqaliswa ilungiselelo elitsha lokwakha iiHolo ZoBukumkani nangona kwakukho inkcaso kwelo lizwe.—Ezra 3:3.
Kungekudala, abazalwana abangabakhi baqalisa ukulungisa isakhiwo esasikade sisetyenziswa ngamabandla aliqela aseTbilisi. Emva koko kwalandela izakhiwo ezibini—esinye eTbilisi nesinye eChiatura, kwintshona yeGeorgia.
IHolo YoBukumkani yaseTbilisi endala (ekhohlo) nentsha (ekunene)
UMzalwana uTamazi Khutsishvili, owayesakha eChiatura, uthi: “Abayi-15 kuthi babesebenza apho yonke imihla. Kungekudala, yathi ndii kuloo dolophu into yokuba sakha iholo elitsha. Sasikhe sive namarhe okuba iintshaba zifuna ukuza zize ziyichithe loo Holo YoBukumkani.”
Yayiza kuphumelela njani loo holo kukho inkcaso engako? UTamazi uthi: “Saqhubeka sisakha saza sagqiba kwiinyanga ezintathu. Akukho bachasi bezayo nangona babesoyikisile.” *
Uncedo Ekwakukudala Lulindiwe
Oophuma-silwe bamaOthodoki nenkokheli yabo, uVasili Mkalavishvili, bebanjiwe
Ngo-Oktobha 2003, kwaqaliswa ukwakhiwa kwidolophu yaseSamtredia. Nalapho, oophuma-silwe bonqulo basongela abazalwana. Phofu, kwathi kusandul’ ukunyuswa udonga, udaka lusemanzi, bambonzeleka abachasi baza baludiliza.
Noko ke ngoNovemba 2003, eGeorgia kwenzeka utshintsho olwazisa isiqabu kubazalwana. Urhulumente omtsha wabangela ukuba iinkonzo ezahlukahlukeneyo zamkeleke. Ngenxa yoko, abaliqela kwaba phuma-silwe bamaOthodoki ababehlasele amaNgqina KaYehova baphoswa ngaphaya kwezitshixo.
Kuthululwa Iintsikelelo Phezu Kwabantu BakaThixo
Emva nje kokuba intshutshiso iphelile, abantu bakaYehova eGeorgia basikelelwa gqitha nguYehova. Kwindibano yesithili yango-2004 kwakhululwa INguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo ZamaKristu ZesiGrike ngolwimi lwaseGeorgia.
Kwaza kwiNdibano Yesithili eyayinomxholo othi “Intlangulo Isondele!” eyayingo-2006 kwenzeka enye into engenakulibaleka. Abazalwana bancuma olukaBlankethe xa beva ukuba uGeoffrey Jackson weQumrhu Elilawulayo uza kunikela iintetho. Bothuka baphants’ ukuwa xa wakhulula INguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele ngesiGeorgia!
Kukhululwa INguqulelo Yehlabathi Elitsha ngesiGeorgia ngo-2006
Zathi waxa iinyembezi kwabaninzi. Omnye udade wathi: “Ndiswele amazwi okuyichaza indlela esavuya ngayo xa safumana iBhayibhile epheleleyo. . . . Soze siyilibale loo ndibano.” Bangaphezu kwe-17 000 abantu abeza kuloo ndibano eya kusoloko ikhunjulwa ngabantu bakaYehova eGeorgia.
^ isiqe. 29 Ukususela ngo-2001 ukuya ku-2003 kwakhiwa iiHolo ZoBukumkani eziliqela kwelo lizwe.
Abaninzi kuthi basazikhumbula iingxelo ezothusayo zaseGeorgia zango-1999 ukuya ku-2003. Abazalwana ehlabathini lonke bebethandazela abazalwana noodade baseGeorgia. (Yak 5:16) Bavuya kakhulu xa yaphela intshutshiso ngo-2003! Ukususela ngoko, abazalwana bebeshumayela ngokukhululekileyo. Balubulela kakhulu uthanda nenkathalo eyaboniswa ngabazalwana ehlabathini lonke.—1 Pet 2:17.